Kooxo burcad ah oo wadooyinka ku yaala Sh/hoose ku haaya dhac layaab leh (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Kooxo burcad ah oo wadooyinka ku yaala Sh/hoose ku haaya dhac layaab leh (DHAGEYSO)
Wararka naga soo gaaraya gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in koox burcad ah ay dhac baahsan ku haayaan dadka iyo rakaabka saaran gaadiidka ka shaqeeya degmada Afgooye.
Koox hubeysan ayaa maalintii shalay deegaanka Busley ee gobolka Sh/hoose ku qafaashay gaari rakaab ah oo kusii jeeday degmada Dhoobleey ee gobolka J/hoose, iyagoo dhac u geysay in ka badan 20 qof oo saarnaa gaariga, kana qaatay lacag iyo qalab ay wateen.
Sidoo kale, darawalkii gaariga waday oo ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen ayaa sheegay in haweenkii rakaabka ahaa qaarkood lagu amray inay eheladooda la xiriiraan oo lacago weydiiyaan, iyagoona ugu hanjabay inay kufsan doonaan hadii aanay lacagtaasi bixin.
Kooxaha falkan geystay ayaa lagu eedeeyay inay kasoo jeedaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana la sheegayaa inay ku labisnaayeen dharka ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya.
Ma jirto wax hadal oo kasoo baxay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, kaas oo ay kaga hadlayaan eedeymaha loo jeedinaayo maamulkooda, waxaana muddooyinkii ugu dambeysay isa soo taraayay dhaca baahsan oo loo geysanaayo dadka shacabka ah xilliyadda ay safrayaan.